UTata oselula - umntu onoxanduva
Ufumene ukuba uya kuba ngubaba. Kwaye uza kufuneka ufunde inxaxheba entsha. Eyona nto yokuqala, ndimele ndithethe. Emva koko, simele sikhumbule ukuba utata omncinci ngumntu onoxanduva.
Uvuyo, ukuhlwithwa, uxhalabe, ukwesaba ... Nantoni na ukuba uzive ulungile! Konke kuxhomekeka kwiimeko apho uhlala khona, ubuhlobo bakho nomfazi wakho, imeko yezemali yentsapho kunye neemvakalelo zakho (phakathi kwazo apho kukho ukwesaba, ukunyaniseka, ukungathandabuzeki, kunye nokukhumbula okususela ebuntwaneni).
Thatha konke, kwaye uhlele okufutshane kwiingxabano zomzwelo. Ingcamango ifanele ibe yinto yokuba wena kunye nomthandane wakho uya kuhlala enzima. Ngaba uza kuba ngabazali abalungileyo, ngelixa uhlala usebini elincinane. Ngaphezu koko, unamathuba onke okusondela ngakumbi. Yaye intsapho yakho encinci iya kuba ngcono, ikhulile kwaye ... ngakumbi okwenene kunye nootata - umntu onoxanduva. Yintoni efunekayo kule nto? Uninzi lwabathandana kunye neengcebiso zethu.
Intando iya kuba ngumama
Into yokuqala ubona ukuba utshintsho olwenzekayo nomfazi. Kufuneka ulungele kubo. Akuthethi ukuba uya kuba yintombazana encinci kwaye ibuhlungu, kodwa kunye naye, kubalulekile ukuba i-metamorphoses iyenze.
Kwaye akusiyo nje isifo esiyingozi, ukulala ukulala kunye nokweba, kodwa kwakhona ukuba umama okhulayo uvakalelwa kukuba ihlabathi elingaphandle liqhutyelwa ngasemva, kwaye liqwalasela ummangaliso owenzeka ngaphakathi kuye. Ngamanye amaxesha uvakalelwa ngumphathi wakhe.
Kodwa ngoku, xa uyayazi ukuba le yendalo, awuyi kukhubeka. Akunjalo? Yiba nengqiqo, uyinyameko kwaye unomdla. Ungazami ukubonisa ukuba umfazi akalungile kwinto ethile. Hlalani nihlala ninamandla, nithanda, ninobubele. Uxolo kunye nenkxaso. Ukuziphatha okunjalo kuya kumnceda ukuba azive inkxaso, ngokukhawuleza ulungelelanise nootata - umntu onoxanduva. Kwaye le mibini miqathango iya kuhlaziywa. Ngendlela, kuboniswa ukuba ipapa yesikhathi esizayo iyanciphisa izinga le testosterone egazini, oko kuthetha ukuba uya kuba mncinci, ubekezele kwaye ube lula ukuvalelwa. Ngoko imvelo inokunceda nawe!
Yivuma , awukwazi kakhulu malunga nokukhulelwa. Into endiyivele kubahlobo, ndake ndibukela ngolu hlobo lweTV. Ixesha lokufumana. Kutheni? Ewe, ukuba uqaphele oko kwenzeka ntoni kumthandayo nomntwana wakho.
Kufuneka uyazi ukuba kutheni ukufuneka ukusela ezi okanye iivithamini, kutheni uvavanya rhoqo, ukutya ntoni ukutya kwasekuseni kunye ne-toxicosis kunye nokuba yiziphi izinto ozithengela umntwana ozayo. Ukubandakanyeka okunjalo kwinkqubo yokuthwala iimvumba kuya kukunceda ube ngubaba owaziyo oza kufumana lula ulwimi olufanayo nomntwana emva kokuzalwa kwakhe. Kule nto kuxhomekeke kwaye kwangoko kwintsapho iya kulawula ukuvisisana kunye nomyalelo omtsha-izinto eziyimfuneko ekuphuculweni okuqhelekileyo kwengane. Ngaphezu kwakho konke, ungalokothi unqabe ulwazi olutsha. Ngokuqinisekileyo, uninzi ukukwenza, ngoku unokuba ngumntu oyedwa kuphela, kodwa oku akuthethi ukuba ungasuka kwindawo ebaluleke kakhulu: ukusuka kumntwana wakho kunye nomfazi wakho othandekayo.
Iingcamango zokuzalwa ngokuhlanganyela
Isigqibo sokuba ngaba ufanele ube khona ekuzalweni komntwana, kufuneka uthathe kunye. Yenza nje ulungelelaniso: awukwazi ukunyanzela nantoni na. Oku kufanele kube yinkqubo yangaphakathi yezibini.
Ukuzala ngokubambisana kunye nomntwana omdala-umntu onoxanduva - lungile, kodwa kuphela xa abazali bobabini bekulungele. Ukuba ukwesaba into ethile (uhlobo lwegazi, indawo engavamile yomfazi, umbuzo ongenayo i-unesthetic), ngoko unako ukuphazamisa: unceda ngexesha lokulwa, kwaye ubuyele ukuze ubuye uthabathe umntwana kumbelekazi. Kwaye kunokwenzeka ukuba intanda inqabile ubukho bakho. Khangela kuye ukuba kutheni ufuna. Izizathu zininzi, kodwa enye yezona ziqhelekileyo-ayifuni ukuba ummbone kwaye uphelelwe amandla. Ngokuqinisekileyo uya kufumana iingxabano zokumqinisekisa ukuba uyona mhle kunabo bonke. Njalo! Ngokuqhelekileyo, thetha omnye nomnye malunga nayo yonke into.
Ubomi emva ...
Xoxa ngezinto eziza kubakho ngaphambi kwexesha. Umfazi ushiya ixesha elingakanani? Ngubani oza kumnceda? Okanye mhlawumbi kungcono uhambe ngekhefu lokubeletha, uze ubuyele kumsebenzi omama omncinci ...
Akukho zintlalo zentlalo kufuneka zichaphazele isigqibo seentsapho. Okokuqala, cinga ngezinto ezilungileyo zentsana. Kakade, kunemvelo ukuba umama abe kufuphi nomntwana. Kodwa ukuba iqabane liyimpumelelo ephezulu kunye nezezimali, kuba kutheni ungayifaki indawo? Emva kwakho konke, ngenxa yomntwana, ubaba ongowokuzalwa usondele kumntanina womnye. Ngakolunye uhlangothi, uxanduva olwandisiweyo luya kukukhuthaza, kwaye mhlawumbi uya kwenza umsebenzi odibeneyo: uyintanda kwaye umntwana usenakekelwa nguwe, ngoko uqobo kwaye uthanda. Kule nto unamandla ngakumbi - zonke izithintelo endleleni ziyanqotshwa. Le yinqanaba lokugqibela lokukhula. Into ebalulekileyo ebomini bakho.
Iintlungu zovuyo, ukuthuthumela nokudideka ngenxa yokuba ukwesaba ukuthatha isidalwa esincinane. Amava okucacileyo kukuqala kobomi obutsha, ubomi bobathathu.
Okwangokunje, cinga ngendlela oya kufundisa ngayo umntwana wakho. Indlela eyaziwayo yimeko ebalulekileyo yokuqonda kwakho. Awudingi ukutshintsha umama wakho. Unomnye umsebenzi - ubawo. Ngaphandle kokungabaza, uthathe uhambo, uhlambe kwaye ... uthetha ngemithetho yendalo yonke, umzekelo. Umsebenzi wesilisa kukuqonda okungaziwa kwaye unamathele abantwana kuwo. Musa ukucinga ukuba kusekuqaleni ukuqala umsebenzi onjalo. Khawukhumbule ukuba yonke into entsha yintsana, kwaye ibonisa ihlabathi kwizinto ezilula: ukuchukumisa isifuba sakho, isandi sensimbi, indawo eqaqambileyo kwideskithophu ... Uza kufunda ngokukhawuleza ukuqonda indlela i-crumb sele ikhule ngayo kwaye wandise isangqa solwazi. Ngeke ube nomphulaphuli othokoza ngakumbi! Umvuzo ophezulu kukuphumeza kweemvuthu ... njenge-portrait yakho ekhethekileyo, umzekelo.
Kutheni amantombazana ekhetha "amadoda amadala"?
Iingcebiso ezifanelekileyo zokufundisa amadoda
Kutheni umntu enganikeli ubuhlobo obusondeleyo
Ndiminyaka eli-18 ubudala kwaye andinayo isoka
Ukuba umntu uvule iimvakalelo zakhe kumfazi
Ziziphi izifo ezikwazi ukuphilisa amadevu egolide
Isivumelwano somsebenzi somqeshwa nomqeshi
Indlela yokuchonga ukuba umntwana ulungele isikolo
I-Cream ephucula ubuciko
Iphutha okanye isisusa - uyayazi njani odibana naye?
Isitya sebhayisiki esilula
Kubanda komnyaka omtsha
I-Hip dysplasia kumntwana
Indlela yokulinganisela ukushisa kwe-basal ngokukhulelwa
Isidlo kunye nenkomo kunye neetatayi
Isaladi yeDessert "Ukuphefumlelwa"
Imithetho e-4 yokulawula ixesha: indlela yokulawula ukusebenza nokuphumla
Tortilla kunye nenyama
Igosa lo kucocwa kwezinto eziphilayo
Izicathulo ze-Classical kwiweshini le shishini
I-Psammoterapiya - isiphumo sokwelapha isanti